नगरमा नै नमुना वडा बनाउछु । नन्दा गुरुङ वडा अध्क्षय पदको उम्मेद्वार । - Brizikhabar
नगरमा नै नमुना वडा बनाउछु । नन्दा गुरुङ वडा अध्क्षय पदको उम्मेद्वार ।
९ असार २०७४, शुक्रबार १७:५० June 23, 2017 Brizi Khabar	0 Comments
वि.सं २०२३ साल पर्बत् मा जन्मिएर सिद्धार्थनगरलाई कर्मथलो बनाइ बसेकी नन्दा गुरुङ भैरहवाका लागि परिचित महिला समाजसेबि हुन । सिद्धार्थनगरमा सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्न पछि नहट्ने नन्दा गुरुङ हाल शान्ती बौद्ध गुम्बा संस्थाको महिला अध्यक्ष हुनु हुन्छ । अत्यन्तै मिजासिलो र स्पस्ट बक्ता को रुपमा पनि चिनिन्छिन नन्दा गुरुङ । शिक्षण पेशाको अनुभब बटुलिकी गुरुङले २०६९ साल तिर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी को भात्रु संगठन राष्ट्रिय महिला मोर्चा सिद्धार्थनगर नगरसमिती भैरहवाको कोसाध्क्षय पद समाल्दै अाइरहेका छन । पार्टी मा सकृयरुपमा लागेको कारण नै गुरुङले वडा अध्क्षय उम्मेद्वार हात पारीकी हुन । उनी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिद्धार्थनगरको वडा नम्बर १३ वडा अध्क्षयको उम्मेदवार हुन् । यसै स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर चुनावी एजेण्डा, विकासका योजना र प्रतिबद्धताका बारेमा ब्रिजिखबर डट कमका श्रीजना पून सँगको कुराकानीः
 तपाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सिद्धर्थनगरबाट वडा नम्बर १३ को वडा अध्क्षयको उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ ? तपाईको उम्मेदवारी किन ?
 राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बाट वडा अध्क्षयको पदको लागि उम्मेदवारी दिनुको कारण सम्रिद्ध वडा को बिकास र सुशान ब्यबस्था निर्माण को लागि हो । त्यसमा अझ भन्नुपर्दा महिला नेत्रुत्व को लागि पनि हो । ५१ % महिला लाई पाखा लगाएर सम्रिद्ध नेपाल बन्न सक्दैन, हामी महिलाले देशको विकास गर्नुपर्छ । पछि परेका तथा पिछडीएको महिलाहरुको विकासको लागि के कस्तो ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ, भन्ने मलाई थाहा छ । यस नगरको विकासका लागि महिलाहरुको खाँचो छ । त्यसैले मैले यस नगरको वडा अध्क्षय पदको उम्मेदवारी दिएकी हुँ ।
 तपाईंले यस सिद्धार्थनगरमा विकासको लागि कस्ता योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?
 हामीले इमान्दारिताका साथ २३ बुदे स्थानिय घोषणा पत्र सार्वजनिक पनि गरी सकेका छौ । पार्टीको केन्द्रिय प्रतिबद्धता पनि जनता लाई दिएका छौ । बिशेष गरी स्थानिय तह मा नै भ्रस्टचारमुक्त प्रशान निर्माण नै हो। साथै स्वाथ्य, शिक्षा र रोजगार, गास, बासको व्यवस्था प्राथमिकता रहेको छ । बाटो, ढलनिकास र स्वच्छ हराभरा वडा बनाउन हामी प्रतिबद्धछौं । महिला अधिकारका कुरा गर्दा एकल, असाय, गरिब महिलाहरुलाई जिविको पार्र्जन गर्ने सिपमूलक तालिमबाट रोजगार दिलाउनेछौं । साथै यस् वडाका बासिन्दाहरुलाई बर्षामा डुबान हुने समस्यालाई समाधान गर्छु ।
यो मेरो उम्मेदवारी जित्नको लागि मात्र होइन । वडाको विकास गर्नको लागि हो । म एक महिला हुँ, मैले बोलेर चुनाव जित्नको लागि नभएर काम गरेर देखाउने र जति पनि वडा विकासका योजना छन् ति सबै पूरा गर्नेछु । त्यसैले जित्नको लागि होइन काम गर्नको लागि हो।
 वडाबासीलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
 मैले यस वडा मा भएका समस्या लाई नजिक बाट नियालेको छु । वडाबासीहरु को समस्या नै मेरो समस्या हो भन्ने कुरा मैले राम्री बुझेको छु । वडाबासिहरु लाई प्रत्क्षय भेटेको छु, उहा हरुको सुझाब सल्लाह र समस्यालाई हृदय गमन गरेको छु । वडाबासिहरुको विश्वाश र मायालाई सिरोपर गरी घरदैलो अभियान मा तिब्ररुप मा जुटेकी छु । विगतमा मैले सामाजिक सघंसंस्थामा गरेको कार्यलाई हेरेर विश्वास गर्नुहुन्छ मलाई जिताउनुहोस्, मैले समाजमा काम गरेर देखाउँछु ।
 भनेपछि तपाईको जित सुनिश्चित छ ?
 सुनिश्चित छ । एकपटक विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्। महिलालाई जोसजागँर दिलाउनुहोस् । हाम्रो पार्टीको प्यानललाई जिताउनुहोस् । हामीले हाम्रो क्षमतालाई समाजमा देखाउनेछौँ ।
 अन्त्यमा वडाबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
 हाम्रो पार्टीले नगरमा नै महिला लाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । यस वडा मा पनि सबै पदमा महिला लाई नै उठाएको छ् । जुझारु कर्मठ तथा इमान्दारिता व्यक्तिलाई उठाएको छ । सिद्धार्थनगरका वडाबासीले हामीलाई भोट गरेर जिताउनुहोस्, हामी नगरकै नमुना वडा वडा बनाएर देखाउछौ । सबै को पहुन्च हुने गरी सुशान को ब्यबस्था गर्ने छौ । त्यसैले जनमुक्ति लाई आफ्नो भोट हाली विजयी बनाउन अनुरोध गर्दछु ।
← ‘बहिस्कार गरेर होईन, चुनाव जितेर अधिकार स्थापित गछौं’ ः उम्मेदवार क्या.जनक
नगरकै नमुना वडा बनाउछु । वडा अध्क्ष्य उम्मेदवार थापा मगर →
४९ औं दिनको पुण्यतिथिमा मगर आदिकवि जीतबहादुर सिञ्जाली मगरको श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०४:३२ Brizi Khabar 0
बांके मा जनमुक्ति को चौथो जिल्ला अधिबेशन सम्पन्न
२५ भाद्र २०७४, आईतवार ०५:२२ Brizi Khabar 0